Home News Khilaaf xoogaan oo weli ka dhex-taagan madaxda ugu sareysa Gobolka Hiiraan
Khilaaf xoogaan oo weli ka dhex-taagan madaxda ugu sareysa Gobolka Hiiraan
Waxaa weli taagan khilaafka u dhaxeeya Madaxda sare ee Maamulka Gobolka Hiiraan,waxaana weli jirin cid weli ku guuleysato inay xal ka gaarto kilaafkaas.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar(Dabageed) iyo ku xigeenkiisa dhinaca amniga Cabdiraxiin Muxumed Taakoy ayuu khilaafkaas u dhaxeeyaa.
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Muxumed Taakoy ayaa sheegay in weli khilaafkaas uu taagan yahay,isla markaana aysan jirin cid xal ka gaartay.
Waxyaabaha ay isku-khilaafeen ayuu sheegay inay la xiriirto nidaamka dowladnimo,hayeeshee warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in uu ka bilaawday Arrimo dhinaca Maaliyadda ah.
Wasiirka arrimaha Gudaha Maamulka Hir-Shabeelle ayuu sheegay in uu la xiriiray,isla markaana uu u gudbiyay khilaafkaas,kana sugayaan jawaab.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa dhawaan Wareysi suu siiyay Radio Dalsan waxa uu ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono cid kasta oo kahor-timaada nidaamka dowladnimo.
Previous articleWararkii Ugu Dambeeyay Ee Soomaaliya Saakaay maxaa ka cusub Muqdisho
Next articleKheeyre oo aan ku farxin talaabo uu qaaday wasiir xukumadiisa ka tirsan!
Musharax Gal-mudug Gen-Tuuryare oo ka digay in Ahlusunna looga...
C.Raxman C.Shakuur oo Ka Hadlay Wararka Sheegaya In uu Gudoomiye Jawaari...